Maxkamad ku taala Sudan oo haweeney dhalinyaro ah ku xukuntay dil… – Hagaag.com
Maxkamad ku taala Sudan oo haweeney dhalinyaro ah ku xukuntay dil…
Posted on 11 Maajo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Maxkamada ku taala Sudan ayaa Haweeney dhalinyaro ah ku xukuntay dil, sida la sheegay waxay dishay ninkeeda kadib markii uu kufsaday asaga oo gacan ka helaya qaar ka mid ah qaraabadiisa.
Garsooraha Maxkamadda Omdurman, ayaa qiray xukunka dilka ah ee Noura Hussein, kadib markii qoyska ninka la dilay ay diideen in ay qaataan mag. Ururada xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqay in la tirtiro xukunka.
Noura, oo 19 jir ah, ayaa lagu qasbay guur iyada oo jirtay 16 sano, kadib waxay ka baxsatay gurigii lagu guursaday, sababta oo aheyd iyada oo rabtay inay wadato waxbarashadeeda si ay u noqoto macallin.
Kiiskani wuxuu kiciyay ra’yiga dadwaynaha oo la macaamilayay bogagga shabakadaha bulshada, waxaa barta Twitter-ka lagu faafiyey in Noura ay hesho cadaalad.
Noura ayaa waxay u carartay guriga habar yarteed, laakin seddax sano kadib ayey ku soo noqotay guriga waalidkeed, kadibna waalidkeed waxay dib ugu celiyeen gurigii ninkeeda.
Lix maalmood ka dib waxay sheegtay in uu soo kireystay qaar ka mid ah ehelkiisa oo rag ah si ay u qabqabtaan oo asna u kufsado. markii uu isku dayey maalintii xigtay inuu kufsado sida ay hadalka u dhigtay waxay gelisay mindi ilaa uu ka dhinto, kadibna waxay u carartay guriga waalidkeed, iyagana waxay u dhiibeen booliska.
Maxkamada ayaa ku heshay Noura dembi dil ula kac ah bishii hore, waxaana si rasmi ah loogu xukumay dil oo daldalaad ah, kadib markii ehelka qofka la dilay ay diideen diyo, sida laga soo xigtay Reuters. Waxaa u furan qareenada Noura in ay racfaan ka qaadan karaan muddo 15 maalmood gudaheeda.